फसोरकोटिम बारे सबै कुरा
1। फार्सोरकोटिमको इतिहास र उत्पत्ति
3। फसोरकोटिमको उकालो लाभ
4। फास्सोकोटामको सुझाव गरिएको डोजज
5। फसोरकोटिमको सामान्य साइड इफेक्ट
6। प्रयोगकर्ता समीक्षा र Fasoracetam को प्रयोग को अनुभव
7। कसरि र कहाँ Fasoracetam किन्नुहोस्
नोट्रोपिक्स आज आगामी प्रवृति मध्ये एक हो जसले फेसोरोकाटिमले नेतृत्व लिनु भएको छ। यो बजारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध नोटोप्रोक्स मध्ये एक हो कि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो संज्ञानात्मक प्रदर्शन बढाउन प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तपाईं आफ्नो रोजगारी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहमत हुनुहुनेछ, तपाईंलाई खाना भन्दा बढी चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ, तपाईं आफैलाई एक अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ जसको कारण तपाईं सफा, व्यायाम, राम्रो सुत्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईं अझै पनि ध्यान केन्द्रित र उत्प्रेरित गर्ने प्रयास गर्ने समस्या अनुभव गर्दछ।
यसबाहेक, यस संसारमा हामी हरेक दिन नयाँ चीजहरू सिकिरहेका छौं, तपाईंको दिमागले एकाग्रता गुमाउन सुरु गर्ने कुरालाई अधिकृत तुल्याउन सक्छ। पर्याप्त नींद र आरामको कमी पनि यो खराब बनाउँछ र मानसिक रूपमा सतर्क रहन संघर्ष गर्न सबै समय असम्भव हुन सक्छ। यो हो कि तपाईंले ध्यान दिनुभएको छ कि तपाइँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर नगरी तपाईको मानसिक गतिविधिलाई बढाउन सक्छ। कुनै आश्चर्यचकित विशेषज्ञहरूले यी ड्रगहरूसँग मानवअधिकारमा कमजोर बौद्धिक क्षमताको सामना गर्नका लागि आएको छ। तिनीहरू केवल ती अगाडि बढ्न मद्दत गर्दैन तर उनीहरूलाई अझ बढी सिक्न मद्दत पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्।
लिएर Fasoracetam एक तरिका हो जुन तपाईंलाई दिन को माध्यम ले तपाईंलाई सहायता गर्न को लागी तपाईंलाई सहयोग को पर्याप्त ऊर्जा र कल्याण को द्वारा सहायता गर्न सक्छ।
1. फार्सोरकोटिमको इतिहास र उत्पत्ति
NFC-1, LAM-105, र NS-105, Fasoracetam को रूपमा पनि जान्छ (110958-19-5) प्रारम्भिक 1990s बाट अस्तित्वमा रहेको छ। यो ड्रग्सको racetam परिवारको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र पहिलो विकसित गरिएको थियो निप्पन शिननुको, एक जापानी फार्मास्यूटिकल कम्पनी जसले वासुलम डेमेन्टियाको उपचारको साथ आउँदछ। कम्पनी 200 मा असफल भए तापनि औषधिको बारेमा अनुसन्धान गर्दा $3मिलियन भन्दा बढी प्रयोग गरे किनभने यो प्रभावकारीता थिएन।
यसको विच्छेद पछि, पूरक मा ब्याज 2013 मा न्युरोफिक्स कम्पनी द्वारा पुन: पुनर्जीवित भएको थियो जब यो निप्पन शिनकोकू देखि फासोरोकाटेम नैदानिक ​​डेटा किन्नु भयो। Aevi Genomic Medicine नेवरफिक्स प्राप्त गरे र किशोरों मा क्लिनिकल परीक्षण गरदै शुरू गर्यो जो चिंता, आत्मकथा, एडीएचडी र जसको ग्लुटेमेट रिसेप्टर जीन को उत्परिवर्तित भएको थियो।
2015 मा, यूएस फूड र ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको अन्वेषण न्यु ड्रग प्रोग्रामले फसोरकोटिमका विकासकर्ताहरुलाई अनुमति दिनु मानिसहरु मा आफ्नो परीक्षण सञ्चालन गर्न र राज्य लाइनहरु मा ड्रग को जहाज पनि शुरू गर्न को लागी। अहिले सम्म, फासोराकोटिम क्लिनिकल परीक्षणको चरण2मा रहेको छ जसमा शोधकर्ताहरू यदि यदि औषधि स्वतन्त्रता स्पेक्ट्रम विकारको उपचारमा उपयोगी छ भने अनुसन्धान गर्दैछ।
बजारमा सबै रेकेटसेटहरू जस्तै, फसोरोसेममले कसरी काम गर्दछ यो अझै पनि पूर्णतया बुझ्न सक्दैन। तथापि, अनुसन्धानले देखाउँछ कि यसले यी तरिकामा काम गर्दछ;
यसले गामा-एमिनोबाइटिरिक अम्ल को लागी कोर्टेक्स मा पाएको रिसेप्टरहरु लाई बढावा दि्छ जो एक निरोधक ट्रांसमीटर हो। Fasoracetam GABA-B रिसेप्टरको गतिविधिले यसरी लिन्छ GABA को मात्रा दुवै केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र र मस्तिष्कमा उपलब्ध।
साथै, ग्लुटेमेट GABA को अग्रसर हो र एक आवश्यक अवरोध न्यूरोट्रांसमीटर हो जसले शिक्षालाई सुधार गर्छ, चिन्ता घटाउँछ, नींद बढाउँछ, र शान्त प्रभाव पार्छ।
यसले मस्तिष्क कोर्टेक्सबाट जारी गरिएको एसिटिलोकोलाइन को मात्रा बढाउँछ। Acetylcholine एक neurotransmitter छ कि ब्रेन मा पाइन्छ र जसको जिम्मेवारी स्मृति, सिक्ने र समग्र सिग्नल मा वृद्धि गर्न छ। Fasoracetam hippocampus र कोर्टेक्समा कोलोनको uptake वृद्धि गरेर cholinergic पनि कार्य गर्दछ। Choline एक पोषक तत्व हो जुन दिमाग मा एसिटिलोकलिन को निर्माण मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ।
क्रोलोनिकिक क्रियाकलाप मात्र फासोराकोटिमसँग मात्र हुन्छ, तर यो एरिनासेटम, पिरासिटाम र रिसेटाम परिवारमा पाइने अन्य कुनैटोप्रोपको साथ पनि हुन्छ। तिनीहरू सबै को पहिचान को सबै पहलुहरु मा एक महत्वपूर्ण सुधार मा जानिन्छ। कहिलेकाँही शरीरमा कोलोनको लागि उच्च माग हुन सक्छ कि यो खाली हुन्छ। फलस्वरूप, यो कम मूड, मस्तिष्क कोहरे र सिरदर्दको कारण हुन सक्छ। यस प्रभावको सामना गर्न, तपाईं पूरक कोलोन लिन सक्नुहुनेछ।
अर्को तरिका Fasoracetam काम केहि प्रकार को ग्लुटेमेट रिसेप्टरहरु लाई मेटाबोटोट्रिक ग्लुटेमेट रिसेप्टर्स (mGluRs) को रूप मा जाना सक्रिय गर्दछ। mGluR सिक्न र मेमोरीको वृद्धि सहित मस्तिष्कमा विभिन्न प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ र पनि चिन्ताको सामना गर्दछ। सबै आठ ज्ञात एमजीओएलआरले सन्तुलनलाई निरन्तरता दिँदै हातमा काम गरिरहेकी थिइन्। ती दुई तंत्रिका उत्तेजना बढ्दै गयो। अन्य छ mGluR तंत्रिका उत्तेजना को कम गरेर neurotoxicity को जोखिम को कम गर्न मा मदद। ग्लुटामेट शरीरमा आवश्यक छ किनकी यो एक महत्वपूर्ण उत्तेजना न्यूरोट्रांसमीटर हो।
जब शरीरमा ग्लुटेमेटमा असंतुलन छ भने, यसले विभिन्न मानसिक र शारीरिक विकारहरू समेत सामना गर्न सक्छ; मिथुन, schizophrenia, एडीएचडी, अवसाद विकार र न्यूरोडगेरिनेरेटिव विकार, जस्तै, अल्जाइमर रोग।
जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनमा, फसोरकोटिमले सफलतापूर्वक दुई दृश्य mGluR को प्रकार्य पुनर्स्थापना सार्थक सार्थक सार्थक सार्थक सार्थक सार्थक साबित गर्यो। यसैले मस्तिष्कमा ग्लुटेम गतिविधिमा कमी ल्याउन थाल्यो। अन्य परिस्थितिहरूमा, फासोराकोटिमले सबै मेटाबोट्रोपिक ग्लुटेमेट रिसेप्टरहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ जुन यसैले सम्पूर्ण ग्लुटेमेट प्रणालीमा सन्तुलनको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ। यही कारणले गर्दा फसोरकैटेम सबैलाई फाइदा दिईएको छ जो एडीएचडी छ, कम ग्लूटेमेट स्तरसँग सम्बन्धित एक अवस्था बिना उत्तेजनाको रूपमा अभिनय गरे।
त्यसोभए, हामी भन्न सक्छौं कि फसोरकोटिमले तीन लक्ष्य रिसेप्टरहरूमा काम गर्दछ जुन यस्तै नतिजाहरु प्रदान गर्दछ। यो पहिलो कुरा यो हो कि यो कोलोन न्यूरोट्रांसमीटर मा यसको रिसेप्टर गतिविधि को प्रचार गर्दछ। दोस्रोमा यो GABA रिसेप्टरहरूको संख्यामा वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्दछ, र अन्तमा, यो ग्लुटेमेट रिसेप्टरहरू पनि साथ दिन्छन्। यी सबै कार्यहरू फेसोराकोटिम प्रयोगकर्ताहरूको संज्ञानात्मक क्षमतामा सुधार गर्न लाग्दछन्।
3. फसोरकोटिमको उकालो लाभ
फसोरकोटिममा एक क्लिनिकल परीक्षण चरण चरण 1 र चरण 11 मा गरियो विभिन्न अध्ययनहरूमा आधारित अधिकांश लाभहरू कानूनी हुन्। टेबलमा ल्याउने फाइदाहरूमा बढी गहन नजर राख्नुहोस्।
ADHD मा प्राथमिक प्रिस्क्रिप्शन
आज, एडीएचडी वयस्कों को सामना गर्नु भन्दा अधिक प्रचलित परिस्थितियों मध्ये एक हो। यो कारणले गर्दा अधिकांश मानिसहरू धेरै कामहरूमा उही समय बिताउँछन् जुन उनीहरूको ध्यान अवधिको सिकारमा जान्छ। फास्टोरैकेटम एडीएचडीका बिरामीहरूको लागि मुख्य प्रिस्क्रिप्टको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले लक्षणहरू छुट्याउन कुशलतापूर्वक र छिटो काम गर्दछ। सबै चीजहरू तपाईं SARM हरू भन्दा पहिले जान्नु पर्छ
जब GABA को एकाग्रता मा एक परिवर्तन हो, र यसको रिसेप्टर्स को बदल रहे हो, एक अवसादकारी मूड देखि पीडित हुन सक्छ। यो कारणले गर्दा अत्यन्त उत्साहलाई शान्त तुल्याउँदछ; यो पनि न्यूरोजेनेसिस र तंत्रिका परिपक्वता पनि नियन्त्रण गर्दछ। तनावले नयाँ न्यूरोन्सको जन्मलाई कम गर्दछ जुन संज्ञता र मूडको विनियमनको लागी जिम्मेवार हुन्छ। जब न्युरोजेनेसेसन प्रेरित गरिएको छ, GABA प्रणाली माड विनियोजन गर्न मद्दत गर्दछ।
फोकस र उत्तेजनाको स्तर बढाउँछ
फसोरकोटिमले प्राय: तपाइँको फोकस बढाउन सक्छ। यसले असहायता हटाउँदछ जुन निराशा र निराशाको कारण हुन सक्छ। Fasoracetam कोलोन को uptake को प्रोत्साहित गर्दछ जो मानसिक ध्यान र एकाग्रता मा सुधार मा मदद गर्दछ। Choline कोशिकाओं, neurotransmission र homocysteine ​​को उत्पादन को संरचनात्मक अखंडता को रखरखाव मा सहयोग को लागि जानिन्छ।
यसबाहेक, कोलोन एसिटिलोकोलिनलाई थप संश्लेषण गरिन्छ जुन तीव्र तवरिका अन्ततः अवशोषित गरिन्छ जुन तंत्रिका सन्देशहरू संचारित गर्न मद्दत गर्दछ। Acetylcholine प्रतिक्रियाहरु को निर्वहन को बढावा गर्दछ जसको मतलब यो सतर्कता मा सुधार र ध्यान बनाए राखन मा मदद गर्दछ।
सिक्न सक्ने क्षमता बढाउनुहोस्
शीर्ष विद्यार्थीहरू र ढिलो बीचको भिन्नता एक राम्रो संज्ञानात्मक क्षमता हो जुन राम्रो शिक्षार्थकहरू छन्। जब एक संज्ञानात्मक कौशल सुधारिएको छ, सजिलो र छिटो किनकि सिक्नुहोस्। फसरासिसेटम को उपयोग पछि, तपाईंको संज्ञानात्मक कौशल बढावा गयो, र तपाईंको मानसिक क्षमताओं लाई बलियो बनाइयो। यसले नयाँ जानकारी को कुशल एन्कोडिङ सम्म न्यूरोलियन गतिविधि को cholinergic सुविधा को माध्यम ले गति गर्दछ।
फसोरकोटिमले मस्तिष्कमा कोलोन स्तर बढाउने काम गर्दछ जसले डेंटिटिक सञ्जालको गिरावटलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले तुरुन्त मस्तिष्क चयापचय सुविधा पनि दिन्छ। फासोरोकाटिम को खपत ऊर्जा मा एक ठूलो वृद्धि संग विशेष रूप देखि सम्बन्धित छ जब विशेष रूप देखि जब उपचार को रूप मा लिन्छ।
शक्तिशाली शक्तिशाली एक्क्सीओलिटिक गुणहरू छन्
चिन्ता फायदेमंद छ किनकी यसले दिमागको लागि दिमागलाई विशेष गरी जब यो शारीरिक स्तरमा हुन्छ। यद्यपि, यदि स्तर उच्च पक्षमा छन् भने, यो बौद्धिक प्रदर्शनको साथ हस्तक्षेप गर्न सम्भव छ। चिन्ता हिचकिलो हुन्छ, निर्णय गर्न असक्षमता र यसले सोच्न गाह्रो बनाउँछ। चिन्ता कम गर्न को लागी एक आक्रामक गतिविधि हो जुन तपाईंलाई आफ्नो दिन को पुन: क्रम को लागी को लागी आत्म-सीमाहरु लाई रोक्न को लागी को लागी अत्याचार र तंत्रिका बारेमा ल्याउन सक्छ।
न्युरोट्रांसमीटर र संज्ञानात्मक समस्याहरूको परिणामको रूपमा चिन्ता आउँछ किनभने यो नोट्रोपिक्सले महत्त्वपूर्ण तरिकामा मद्दत गर्न जान्दछ। एक यस्तो नोट्रोपिक फासोरासिटेम हो जसको कारण यो एक संज्ञानात्मक वृद्धि र एक एक्सीआयोटिक एजेन्ट हो जो कि अधिक GABA मा मस्तिष्क को उपलब्ध गरािन्छ जसलाई कुनै अतिरिक्त उत्तेजनात्मक क्रियाकलाप को विरोध गर्दछ। यी कार्यहरूले सहि, भरोसा मौखिक गतिशीलता सिर्जना गर्दछ र साथै बढि सामाजिक हुन प्रेरणा बढाउँछ।
यद्यपि धेरै औषधीय एजेंटहरू समान प्रकार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, फसोरकोटिम एकदम राम्रो विकल्प हो। यसको कारण यो कारणले गर्दा यो एक्सीइलिटिक्स प्रजनन गर्ने काम गर्दछ जब लामो समयको लागि प्रयोग गरिन्छ। ती कसले फसरोकाटेम प्रयोग गर्नुहोस् स्वीकार गर्न सक्छ कि यो लतको कारण होइन तर निर्भरताको लागि शून्य सहनशीलता संग राहत दिन्छ। जब GABA र glutaminergic मार्ग संतुलित छन्, त्यसपछि अत्यधिक डोजाइजेशन र झुकावको संभावना कम हुन्छ।
यसले मेमोरी हानि रोक्न सक्छ
मेमोरी हानिको साथमा भर पर्दा निकै जटिल छ जब तपाइँ परिचित चीजहरू वा व्यक्तिहरूलाई समेत सम्झन सक्नुहुन्न। तपाईं आफ्नो आत्मविश्वास, गरिबी र स्वतन्त्रतालाई कम गर्न सक्ने जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो महसुस गर्न सक्छ। फसोरसिटेम एक मानसिक तपस्या र कम मेमोरी हानिमा रहन मद्दत गर्न जान्छ।
चूहों मा अनुसन्धान गरे, फसोरसिटेम ले मेमोरी की समस्याहरु लाई रोकन को साबित गर्यो जो बेकोफेन को कारण हो, GABA-B रिसेप्टर को एक एक्टिनेटर। यो पनि एसिनेलचोलिन को स्तर बढाने र GABA-B को सक्रियता को कारण कम से कम गरेर एमनेशिया को कम गर्न को लागि रिपोर्ट गरियो।
यदि तपाइँ आफ्नो रोजगारीको गतिविधि सञ्चालन गर्दा उत्प्रेरित रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले संज्ञानात्मक पदोन्नति बढाउनु पर्छ। आज, धेरै औषधीहरूले एकलाई प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ तर धेरै थोरै डिलिवरी। नोटोप्रोक समाधान न केवल प्रतिज्ञा गर्दछ तर तिनीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ विशेष गरी प्रदर्शन वृद्धिमा। संज्ञानात्मक कौशल मा एकदम सुधार छ कि तपाईं केवल बेहतर लक्ष्य नहीं बल्कि व्यापक दृष्टि र परिप्रेक्ष्य संग पनि गर्न सक्छन्।
जानवरहरूमा गरिएका परीक्षाहरूले देखाउँछ कि यस औषधिको प्रशासन पछि, तिनीहरू बढी रचनात्मक हुन्छन्। उनीहरूले पूरै पूरै लिन सक्नु अघि भन्दा बढी ह्यान्डल गर्न सक्षम छन्। त्यहि व्यक्तिसँग हुन्छ। कसैले आफ्नो लक्ष्य र जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न बढी ध्यान दिन सक्छ। प्रेरणाको स्तरमा वृद्धिले एकलाई अझ राम्रो र अधिक कुशल तरिकामा जीवनसँग सामना गर्न मद्दत पुर्याउँछ जुन पहिले नै भयो।
उत्तेजनाको रूपमा काम गर्दछ
यो नोटोट्रिकले उत्तेजनाको रूपमा ठूलो काम गर्दछ किनभने यसले तपाईंको मस्तिष्कको प्रकार्य रिबुट गर्न मद्दत गर्न सक्छ जसले गर्दा यो विस्तारित अवधिको लागि ताजा राख्छ। फसोरकोटेमम समीक्षाहरूबाट, तपाइँले बताउन सक्नुहुन्छ कि धेरै व्यक्तिले तातोपानीलाई यो प्रदान गर्दछ।
4. फास्सोकोटामको सुझाव गरिएको डोजज
(1) डोजज जानकारी
एडीएचडी रोगीहरूमा भएको एक नैदानिक ​​परीक्षणमा, 100 को खुराक, 200 र 400 मिलीग्राम मौलिक रूपमा व्यवस्थापन गरियो। अनधिकारीय, अधिकतर प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि फसोरकोटिम दैनिक 100-800mg को एक खुराकमा प्रभावी थियो। फसोरकोटेमले पनि क्रमिक रूपमा लिइन्छ, जसको अर्थ छ कि तपाइँले प्रत्येक दिन 5-15mg को बीचको दायराको साथ जिब्रोमा राख्न सक्नुहुन्छ।
उच्च फासोरोकाटिम खुराकको लागि जुन तपाइँले प्रभाव पार्ने विषयलाई विषयवत गर्दैन, तपाइँले एक दिन 100mgs लिन सक्नुहुनेछ। यदि यो तपाइँको पहिलो पल्ट फासोराकोटेम ले रहेको छ भने, तपाइँ एक सानो खुराक को लागी सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। सिफारिस गरिएको एउटा प्रति 10-15mg हो जुन एक दिनमा कम्तीमा तीन खुट्टा खुल्छ। यो एक दिन 30-50mg खुराक माथि छ। एकपटक तपाईंले परीक्षण गर्नुभएपछि तपाईंको शरीरले औषधीलाई सहन सक्छ, तपाइँ आफ्नो खुराक बढाउन सक्नुहुन्छ। एक ओभरडोज ले विलक्षण र उल्टी लाई निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले तपाईंलाई सावधानी रहनु पर्दैन।
फासोराकेटाम लिनको लागि सबैभन्दा राम्रो समय कुनै खाना खाने गर्नु भन्दा बिहानको हो। धेरै Faracetam समीक्षाहरू दाबी गर्नुहोला कि त्यस समयमा यो एक राम्रो उत्तेजक प्रभाव दिन्छ। सुत्न गर्नु अघि यसलाई तपाईले निद्रा खोज्ने समस्याको कारण पनि हुन सक्छ।
फास्टार्टेटाम सुरक्षित हुन्छ जब पुरानो र जवान दुवै द्वारा लिइएको छ। यद्यपि, पुराना वयस्कों को लागि उनको सिस्टम देखि ड्रग को साफ गर्न को लागी अधिक विस्तारित अवधि लाग्छ। उनीहरूले उच्च रक्तचापलाई कम गर्न सक्दथे जबकि साना फसरोकोटामम खुट्टामा सानो व्यक्तिको तुलनामा।
यसकारण योट्रोट्रिकले प्रायः खुराकहरू छोटो छोटो फलामोरेटेमम आम्दानीको कारण हो भने यसको अर्थ शरीरबाट छिटो हटाइन्छ।
यो फसरासिटेमम ले आफ्नो मा राम्रो ले राम्रो छ, तर केहि मान्छेले यसलाई स्टक गर्न मनपर्छ। स्ट्याकिङ गर्दा, तपाईं फसोरकोटिम सँगै सँगै लैजानुहोस् nootropics। नतिजाको रूपमा, तपाइँ फसोरकोटिम स्ट्याक भन्दा बढी प्रभावशाली प्रभावलाई हटाउन सक्नुहुन्छ।
यो स्ट्याक केहि कारणहरु को कारण सबै भन्दा शक्तिशाली स्टक हो। एकपटक तपाईं दुई खुराक जोडीपछि, मस्तिष्कमा acetylcholine को मात्रा मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि यसैले प्रयोगकर्ता को इष्टतम भावना दिन। Fasoracetam राम्रो GABA-B विरोधाभास भएको, यो तपाईंको ध्यान मा महत्वपूर्ण रूपमा सुधार हुनेछ, जबकि एक समय मा कलुरेशममले तपाईंको मन बढाउनेछ।
कोलोरासिटाम, फासोराकोटिम स्ट्याक न्यूरोलोजिकल विकार, मूड वृद्धि र एकाग्रतामा मद्दत गर्न भनिन्छ। यदि तपाइँ स्ट्याक चाहानुहुन्छ कि तपाइँ ध्यान केन्द्रित र सन्तुलित राख्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाई यो स्ट्याक लिन विचार गर्नुपर्नेछ।
यसको खुट्टा समावेश छ; 15mg Fasoracetam (110958-19-5) र 10mg कलुरसिटाम एक दिन वा दुई पटक लिइएको।
नोपप्पस, फार्सोरैटेम, चोलिन स्ट्याक
यदि तपाईंको सबै आशय बढ्दै गएको छ फोकस हो, यो यसको लागि सर्वोत्तम फासोरोकाटिम स्ट्याक हो। दुवै फासोरोकाटिम (110958-19-5) र नोपपप्पले कोलोनले बढाएको प्रभावलाई प्रभावशाली प्रभाव दिन्छ।
यस स्ट्याक लिनको फाइदा भनेको हो कि यसले संज्ञानात्मक फोकसको साथ मद्दत गर्छ र तपाईलाई उदासीन महसुस नगरी स्थितिगत जागरूकता बढाउँछ। स्ट्याकका लागि तपाईंले सबै दिन ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ, यो उत्तम विकल्प हो।
(3) Fasoracetam प्रभाव अवधि
तपाईं यसको प्रयोगको तीस मिनेट पछि चिकित्सकीय फासोराकोटिम प्रभाव अनुभव गर्न सम्भव छ। कहिलेकाहीँ सुत्ने बेला, यसले प्रभाव छिट्टै बढाउँछ, र तपाइँले मात्र दस मिनेटमा फासोराकोटिम प्रभाव महसुस गर्न सक्दछ। प्रभाव तपाईलाई आठ घण्टा सम्म पुग्न सक्छ। फासोराकोटेम आधा-जीवन लगभग दुई वा तीन घण्टाको छ र नियमित रूपमा प्रयोगमा शरीरमा जम्मा हुन्छ।
(4) औषधि अन्तरक्रिया
त्यहाँ धेरै औषधीहरू छैनन् जो फसोरकोटिमको क्षमतालाई असर पार्न सक्छ। यसको साथ अन्तरक्रिया मात्र लागी औषधि फिनेबुट, GABA रिसेप्टरहरू सक्रिय गरेर काम गर्ने एउटा यौगिक हो। यो प्रायः संज्ञानात्मक प्रकार्य सुधार गर्न र चिन्ता कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Fasoracetam GABA-B रिसेप्टर को मात्रा बढाने र phenibut को सहनशीलता को कम गरेर phenibut प्रतिक्रिया बढ्छ। यदि तपाइँ कुनै पनि मेडिकल समस्याको साथ निदान गरिएको छ वा तपाइँ निर्धारित औषधिको अधीन हुनुहुन्छ भने, तपाइँ फेसोराकोटिम लिनु अघि तपाइँको चिकित्सकसँग कुराकानी गर्न सोच्नु पर्छ।
गर्भवती महिलाहरूलाई औषधिबाट टाढा राख्न सल्लाह दिइएको छ। लिङ्गले निर्धारण गर्दैन कि तपाइँ यो पूरक लिन सक्नुहुन्न कि छैन; तर वजन निर्धारण निर्धारण कारक हुन सक्छ।
5. फसोरकोटिमको सामान्य साइड इफेक्ट
यो सामान्य छ कि हरेक अयोग्य पदार्थको साथ एक साइड इफेक्ट हुनेछ। यो औषधि तथापि सुरक्षित हुन जान्छ, र तपाइँले फासोराकेटामम प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि तपाइँ कमसेकम फासोराकोटिम दुष्प्रभावबाट ग्रस्त हुनेछ। तर, यो आवश्यक छ कि तपाईं ध्यान दिनुहोस् कि हाम्रो शरीर र दिमाग फरक फरक छ र यसैले, कुनै आश्वासन छैन कि तपाइँ कुनै पनि प्रभावबाट पीडित हुन सक्दछन् भने अरूले भनेका छन् कि कुनै पनि फसोरोकाटम साइड इफेक्टहरू भएन भने। केहि केवल सामान्य एलर्जी प्रतिक्रियाहरु जुन समय संग जान सक्छ, तर यदि उनि जारी रहछन, तपाईं Fasoracetam उपयोग को रोक सकते हो।
फासोराकोटम साइड इफेक्टबाट पीडाको संभावना केही कारकहरू मा निर्भर गर्दछ, र तपाईंले योटोटिक प्रयोग गर्ने तरिकालाई गम्भीरता निर्धारण गर्दछ। ओभरडाइज साइड इफेक्ट्स को मुख्य कारणहरु मध्ये एक हो। धेरै धेरै पूरै लिन्छ प्राय: फसोराकोटेम साइड इफेक्टको अनुभवको सम्भावना बढाउन सक्छ। केवल सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं मात्र पर्याप्त Fasoracetam खुराक लिने सल्लाह दिइएको छ; अन्यथा, तपाईं आफ्नो शरीर र मस्तिष्क अत्यधिक अप समाप्त हुन सक्छ अविश्वसनीय प्रभावहरू ट्रिगर।
यहाँ केहि फलामोरैटेम साइड इफेक्ट हुन् जुन रिपोर्ट गरिएको छ;
गेस्रोइन्टिनस्टिनल असुविधाबाट पीडित यानी, दस्त, कब्ज, चिसो र नलीले प्रायः प्रायः दुष्प्रभावहरु मध्ये एक हो जसले धेरै मानिसहरुलाई पीडित गरेको छ। यसबाट पीडितलाई रोक्न, दायाँ खुराक लिनुहोस् र फसरोकेटामलाई उच्च गुणस्तरको प्रयोग गरी सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि, यदि तपाईलाई ध्यान दिनुहुन्छ कि साइड इफेक्टहरू अधिक गम्भीर छ भने, तपाइँ एक डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
हेडिसस रीसेटाम नोट्रोपिक्सको साथ सामान्य हो किनभने तिनीहरू मस्तिष्कमा कोलोन रिजर्भेसनको कमी लाग्छन्। पीडाहरू प्रायः हुनसक्दछ तर टाउको दुखाइसँग टाढा हुन सक्दछन्, तपाईले एक पटक लिन सक्नुहुनेछ Fasoracetam स्ट्याक त्यो एक कोलोन स्रोत छ, जस्तै, अल्फा GPC। गलत खुट्टा र प्रयोग को गलत आवृत्ति ले पनि हेड दुखाइ को अनुभव गरेर चिह्नित गरेको छ, र तपाईंलाई चाहिए, तब सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं सही Fasoracetam खुराक ले लें। यदि सिरदर्द छ भने, एक न्यान लिनुहोस् किनकि यसले मस्तिष्क रिसेट गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले पानी लिनु भएको रकम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ।
फसोरकोटिम पछाडि केही व्यक्तिहरू विरूपणबाट पीडित हुन सक्छन् र तत्काल आफ्नो विचारहरू व्यवस्थित गर्न सक्षम नहुन सक्छ। राम्रो कुरा भनेको महसुस केहि समय पछि हुन्छ।
रोशनीले बनाएको बस्तुले पनि प्रभावहरू मध्ये एक हो कि मान्छे विशेष गरी यसको प्रयोग पछि पहिलो उदाहरणमा पीडित हुने गरेको छ। उनीहरूले दाबी गरेका छन् कि लाइटहेडनेसले केही चोटि पूरै पूरै प्रयोग गरेपछि।
अरूको लागी, यो औषधी लाइबेरिया कम गरेर आफ्नो अंगहरु कम गरेर आफ्नो लिंग जीवनलाई नकारात्मक असर पार्दछ। यौन दुर्व्यवसायको प्रयोगले यो फासोरोकाटाम प्रभावको सामना गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
फसरोकाटमको धेरै खुराकहरू एकपटक, तपाईं निद्राको कमीबाट पीडित हुन सक्नुहुनेछ। यही कारण हो कि तपाइँ सिफारिस गरिएको खुट्टा लिन सल्लाह दिइन्छ किनकि यसले तपाईंलाई सुत्न सुत्न मद्दत गर्दछ।
जब तपाईं आफ्नो फासोरोकाटम खुट्टा सुरू गर्न यति उत्साहित हुन सक्नुहुन्छ, तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि यसले मान्छेबाट काम गर्दछ जुन पहिले विगतमा प्रयोग गरेको छ। अरूको लागि, तिनीहरू यसको प्रयोगको बारेमा शंकास्पद हुन सक्छन् र सूचित निर्णय गर्नका लागी अर्को व्यक्तिको कथा सुन्नेछ। यो केवल तपाईं आफ्नो दिमाग को सुलझाने मा मदद गर्नेछ तर यसले तपाईंलाई फसोरकोटिम जाने बाटो हो भन्ने विश्वास दिन्छ।
विगतमा फसोरकोटिम धेरै सुरक्षित र प्रभावी ढंगले प्रयोग गरीएको छ, र ती प्रयोगका अधिकांशले यसको सकारात्मक अनुभव गरेको छ भनेर धेरै जनाले बताएका थिए कि उनीहरूको जीवन नाटकीय रूपले परिवर्तन भएको छ र उनीहरुले योट्रोट्रिक वर्ष पहिले जान्थे। यहाँ केहि फसरोकाटम समीक्षाहरू छन् जुन हामीले हाम्रो ग्राहकहरु बाट प्राप्त गरेका छौं
लुली भन्छिन् "केही महिनाअघि मलाई मेमोरी हानिबाट पीडा लाग्यो र त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा निराशाजनक क्षण थियो। मैले केही डाक्टरहरू भेटें, तर मलाई दिइएका औषधहरू मध्ये कुनै पनि काम लागेन। मलाई यति कष्ट र महसुस लाग्यो कि यो के कारण हुन सक्छ। म केवल 30 हुँ, र म मेरो साथीको नाम पनि सम्झन सक्दिन। सौभाग्यवश, काम मा मेरो सहयोगी सिफारिस गरिसकेको छ कि म फेसोराकोटेम को उपयोग गर्दछु र जब देखि मलाई मदद को लागि धेरै हानिकारक थियो, त्यो एक दिन त्यहि उनलाई Phcoker.com मा आदेश दिए। चार हप्ता भित्र, मेरो मेमोरी अत्यन्त सुधार भएको थियो। म धेरै उत्साहित थिएँ र मेरो सहयोगीलाई धन्यवाद र यो अद्भुत साइट पर्याप्त छैन। अहिलेसम्म, म लगभग सबै कुरा सम्झन सक्छु। मेरा मित्रहरू भन्छन् कि म सामानहरू सम्झन सक्छु कि म पनि मतलब छैन। म कसैलाई कोसिसकोटिमलाई सिफारिस गर्नेछु जुन मेमोरी हानिबाट पीडित हुन्छ। "
जुआन भन्छिन्, "मेरो छोरा एडीएचडीबाट पीडा भएको छ, र उनको डाक्टरले उनलाई धेरै दबाइहरु भित्र राखेको थियो। ती सबैले उसलाई खराब बनायो, र यसले मलाई बलियो बनायो। मैले सधैं यस अवस्थामा अनुसन्धान गर्दै धेरै घण्टा बिताएँ र हामी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं। सौभाग्य देखि म एक राम्रो Fasoracetam समीक्षा मा आए कि मेरो ध्यान पकडे। मैले यो आदेश दिए, र हाम्रो Fasoracetam अनुभव राम्रो भएको छ। दबाइले मेरो छोरालाई विद्यालयमा सहयोग गरेको छ, र अहिले तिनी एक असल छात्र हुन्। यो तीन हप्तासम्म उहाँलाई केही परिवर्तनहरू देखाउन सुरु भयो, र मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि मैले फासोराकेटाम बारे जान्थें। यदि तपाईंलाई यस्तै समस्या हुन सक्छ भने, म तपाईंलाई यो प्रयास गर्न आग्रह गर्नेछु। "
बाई भन्छिन्, "मलाई थाहा छैन किन गरीब प्रदर्शन र निन्दा मेरो काममा लागेका थिए। मैले काममा रहेको केही घण्टा पछि फोकस र एकाग्रता गुमाएँ। मेरो वरिष्ठले उजुरीमा राखे, र मलाई मद्दत खोज्नुपर्छ। केहि समयका लागि फासोराकेटाम प्रयोग गरेर, मलाई राम्रो लाग्यो। मलाई सक्षम बनाइयो, मेरो फोकस र एकाग्रता फिर्ता आउँछ, र म सबै दिमागी काम गर्न सक्छु जस्तो कि मेरो दिमागलाई अधिकृत गरिएको छ। मेरो दिमाग स्पष्ट छ र मैले अब कम्तिमा समय भित्र काम गरेको कार्य पूरा गर्दछु। मलाई थाहा छ यो अवास्तविक लाग््छ, तर काममा सबैले मलाई के गरिरहेको छ मलाई सोधिरहेको छ। तिनीहरूले अब मलाई आलसी हड्डीलाई बोलाउँदैन किनभने उनीहरूले प्रयोग गरे र तिनीहरूले मलाई मेरो विभागमा सबैभन्दा राम्रो कर्मचारीको रूपमा नामाकरण गरे। जो को लागी यस पूरक को लागी संदेह छ को लागी, म तपाईंलाई निपटने को लागि पूछूँगा Fasoracetam खरीद किनकि यो हरेक पैसाको लायक छ जुन तपाईं खर्च गर्नुहुनेछ। "
चेन भन्छिन्, "मैले केहि पटकको लागि Phcoker.com प्रयोग गरेको छु, र सबै अवसरहरूमा मैले सर्वोत्तम सेवाको आनन्द उठाएको छु। यो एकमात्र साइट हो जसले सर्वोत्तम ग्राहक समर्थन र जसको खरीद प्रक्रिया सीधा छ। कहिल्यैसँग मेरो साथ कुनै समस्या छैन, र म सधैं मेरो प्याकेजको समयमा प्राप्त गर्दछु। Phcoker आफ्नो अत्यन्त सस्ती मूल्य र उत्कृष्ट गुणलाई विचार गर्ने ठाउँको एउटा मणि हो। म सधैं उनको स्वास्थ्य संग भरोसा गर्दछ, र मैले सिर्फ Fasoracetam को लागि आदेश दिए, र म यो भन्दा अधिक हूँ कि मेरो Fasoracetam अनुभव सकारात्मक हुनेछ। म यहाँ मेरो फोस्रासोटेमम समीक्षा को एक महिना मा पोस्ट गर्नेछु। यदि तपाईं पूरक किन्नका लागि थियौं र तपाईंको पैसाको लागि लायक छैन भने, त्यसपछि तपाईका लागि जानु भएको साइट हुनुपर्छ। "
फ्यान भन्छन्, "म अन्तिम डरले डर लाग्यो कि म आफ्नो परीक्षा असफल हुन सक्छ किनभने मलाई हल्का अनीशियाको पहिचान भएको थियो। मैले यति बलियो महसुस गरे किनभने म सिमेन्टमा यति कडा मेहनती पछि असफल भएन। मेरो सहपाठीले मलाई फेरोराकोटिममा पेश गर्यो, र मैले पछि पछि देखेको छैन। मेरो मानसिक प्रदर्शन बढेको छ, र म कक्षामा सिखाएको लगभग सबै कुरा सम्झन्छु। मैले भर्खरको सेमेस्टरको नतिजा पाएको छु, र मैले स्कूलमा सामेल भए पछि मैले यति राम्रो प्रदर्शन गरेन। म दिमाग कोहरे को अनुभव नहीं गर्छन, र यो पूरक एक पसंदीदा बन्यो। मेरो फसोरकोटिम अनुभव मात्र महाकाव्य हो! "
जिन्हाई भन्छिन्, "मेरो भाइ निराशा र चिन्ता संग लडिरहेको छ, र हालै उनी आत्महत्या हुन थाले। यसले हामीलाई भावनात्मक रूपमा पारिवारिक रूपमा घृणा गर्यो किनभने केही प्रभावकारी हुन लागेन। सबै उपचार र प्रतिबन्ध रणनीतिहरू पैसाको बर्बाद जस्तै देखिन्छ। केही औषधिहरूले केही समयसम्म काम गरेपछि अरूले उहाँलाई थाइरोइड समस्याबाट पीडा छोडे। यो एक मित्रको नतिजा जुनसुकै पीडा थियो उसको सकारात्मक फोस्रोसेटेमम समीक्षा। त्यसो भए पछि चीजहरू अहिले एक पछाडि घुम्न थालेका छन्। यो केवल एक महिना हो किनभने उहाँले औषधि लिन शुरू गर्नुभयो र चिन्ता आक्रमणहरूमा ठूलो भिन्नता छ। उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ कि उहाँ भर्खरै रेसिंग विचारहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ र उनको निन्द्राको आनन्द उठाउनुहुन्छ। अब सम्म उनको बानीहरु लाई राम्रो बदले मा बदल दिए छ, र हामी सबै को फैसोरैटेम को विशेषता बता सकते हो। "
जुन भन्छन्, "फसोरकोटिमले गरेपछि केही हप्ता पहिले खरिद गरिरहे र यसलाई धार्मिक रूपमा लिन्छु, म भन्न चाहन्छु कि यो मेरो लागि धेरै सहयोग भएको छ। मैले मेरो मूडमा उल्लेखनीय सुधारको आनन्द उठाएको छु, र म यसको सुरुवात गर्नु अघि मलाई महसुस गर्न भन्दा बढी रमाइलो लाग्यो। मेरो ऊर्जाको स्तर चलेको छ, र म थकित महसुस गरिरहेको छैन। अझ राम्रो, म अब मेरो दैनिक कर्तव्यहरू ब्रेक लिन आवश्यक बिना पूरा गर्न सक्दिन। 60 मा, म विश्वासपूर्वक भन्न सक्छु कि मैले मेरो जीवन मा यो राम्रो महसूस नहीं गरेको छ। बिर्सनु हुँदैन कि म अब बच्चा जन्माउन धेरै उत्पादक दिन पछि सोन्छु। म निस्सन्देह सबैलाई यो सिफारिस गर्नेछु जसले आफ्नो मूडमा सुधार चाहिन्छ। "
सबैजना उनी / हान्ता भन्दा स्मार्ट हुनको लागि अग्रिम देखिन्छ। यद्यपि एक लामो समयको लागि होइन, छोटो क्षणको लागि चतुर्भुज महसुस गर्नुको एक आत्म-सम्मान सुधार गर्न एक लामो बाटो हुन सक्छ। फसोरकोटाम पाउडर विद्यार्थीहरू बीच मात्र लोकप्रिय छैन, तर यो सबैलाई अरूलाई सजिलो हुन्छ जुन ती तेज मन मन पर्छ जसले कुशलतापूर्वक बहुकल्याउन सक्दछ। त्यसोभए, हरेक व्यक्ति जो अरु भन्दा अगाडि जान्छ, उनीहरूले कुन कुरा लिन्छन् र धेरै चीजहरू राख्दछन्, र सबै कुराको राम्रो सम्झना राख्दछ जुन उनीहरूलाई कुनै नोटोट्रिकले फाइदा लिन सक्दछ। यसका लागि थप्नका लागि, फसोरकोटिमले हाम्रा रोगहरू र सर्तहरूसँग व्यवहार गर्ने कामदारहरू छन् जुन हामीले हाम्रो रोजगारीको जीवनमा व्यवहार गर्छौं।
मनमा राख्नु पर्ने हो कि फसोरकोटिमले तपाईंको शरीरमा कुनै पनि विदेशी यौगिक परिचय गराउँदैन बल्कि यसको कोलोन प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको शरीरले एसिटिलोकोलाइनको उत्पादनलाई बढावा दिन आवश्यक छ। यो तपाईलाई मनाउनको लागि पर्याप्त कारण हो कि यो पूरै मात्र तपाइँको शरीरको लागि राम्रो हो। यद्यपि, तपाईलाई एक विश्वसनीय सम्झौता प्राप्त गर्न आवश्यक छ जुन तपाईले गुणस्तर उत्पादनको ग्यारेन्टी दिनुहुनेछ।
यो नोटोप्रोकले सबै फाइदाहरू साथ दिन्छ, तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाई फेस्सोकोटेम किन सक्नुहुनेछ। दुर्भाग्यवश, धेरै मान्छे तपाईबाट सजिलो पैसा बनाउन चाहान्छ, र तपाईले फसरोकाटिम कि यो नकली हो कि भन्ने सम्भावना छ, र यसले तपाइँलाई वांछित नतिजा प्रदान गर्न सक्दछ। केहि मा फासोराकोटिम पाउडर नहुन सक्छ जबकि अन्यले लेबलमा चिन्ह लगाइएको सही एकाग्रता नहुन सक्छ। यसको मतलब यो मात्र पैसा को बर्बाद हुनेछ र खतरनाक यौगिक हुन्छ भने तपाईंको स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्न सक्छ। सुरक्षित हुन, तपाईलाई जाने-जाने सप्लायर कहाँ जान सक्नुहुन्छ तपाई फेसोरोसिटेम अनलाइनमा किन्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले यदि तपाइँ साइटको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ फेसोरोक्टेमम अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि Phcoker.com सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो। हामी एक विश्वसनीय साइट हो जुन तपाईं आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ Fasoracetam खरीद र बजारमा उच्च गुणस्तर ग्रेड प्राप्त गर्नुहोस्। अन्य साइटहरु जो फास्सोकोटेम पाउडर को मिश्रण गरेर बन्डरहरु र भरने को साथ गरेर दोगुना हो, हाम्रो 100% प्रामाणिक हो।
हामी तपाईंलाई फास्सोकोटिमसँग बजारमा यसको प्रभावकारीता र गुणवत्ता सम्झौता बिना बजारमा सबैभन्दा किफायती मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेछौं। हाम्रो साइटमा, हामी पनि प्रस्ताव गर्छौं थोक नोट्रोपिक पाउडरहरू बिक्रीको लागि अनुकूल मूल्यहरू। तपाईं सस्तो ग्रेडहरू किन्नको लागि प्रलोभन हुन सक्नुहुनेछ तर सँधै सस्तो उत्पादन, कम क्षमता र उच्च प्रदूषणको अधिक ध्यान दिनुहोस्। यो तपाइँको पैसाको लायक छ कि लगानी बनाउन तपाईंको छनौट हो। हामी सधैँ हाम्रा ग्राहकहरूको गुणस्तर उत्पादनहरू ग्यारेन्टी गर्दछौं, र हाम्रा उत्पादनहरू प्रयोग गरिसकेपछि, तपाईंले सम्भावना कम से कम समय भित्र परिणामहरू अनुभव गर्नुहुनेछ। हाम्रो लाभ किने अर्को लाभ यो हो कि हामी कहीं र समय मा डिलिवरी बनाउछौं। एक पटक तपाईले हामीलाई आदेश दिए पछि, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाइँ सुरक्षित रूपमा भर्खरै ढुवानी समय भित्र आफ्नो पार्सल पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं खरीदमा रुचि राख्नुहुन्छ थोक नोट्रोपिक पाउडरहरू, त्यसपछि हामी तपाईंको लागि उत्तम सौदा मिल्यो।
आजबाट फासोरोकाटम किन्नुहोस् र कम समयमा कार्यहरू गर्न र सबैभन्दा राम्रो तरिकामा काम गर्ने क्षमताको मस्तिष्कको क्षमता बढाउनुहोस्।
मर्चन, सी।, मोर्गन, आर, पापाडोप्लोस, जे, र फ्रिडमान, डी। (एक्सएनएमएक्सएक्स)। फसोरकोटिमसँग संयोजनमा फिनेबट ओवरडोज: दुर्व्यवहारको दुर्व्यवहार। क्लिनिकल गहन हेरविचार र चिकित्साको जर्नल, 2016, 1-001।
एलिया, जे, अनगल, जी, काओ, सी।, अम्ब्रोसिनी, ए, यीशु-रोरियो, एन।, लार्सन, एल ... ... र सिके, बी (2018)। ADHD र glutamatergic जीन सञ्जाल भेरिएन्टहरू सँग molesolescamam मा Fasoracetam mGluR न्यूरोट्रांसमीटर संकेत सिग्नल। प्रकृति संचार,9(1), 4।
हर्मेनन, बी, रोबेन, के., विटरर्स, जे, र लेन्सन्स, टी। (एक्सएनएमएक्सएक्स)। फसोरकोटिमको ठोस राज्य प्रपत्रको अध्ययन: एक सम्भावित एंटी-अल्जाइमर औषधि। औषधि विज्ञान को जर्नल, 2017 (106), 5-1317।